Otu esi ejikọ na sava EA FIFA | Nzukọ mkpanaka
Edere Ferreno | | Egwuregwu
Ijikọ na sava EA FIFA anaghị adị mfe mgbe niile, ihe ọtụtụ ndị ọrụ chọpụtarala mgbe ụfọdụ. Ọ bụghị ihe ijuanya na oge ụfọdụ ọ gaghị ekwe omume ijikọ na sava ndị a, n'agbanyeghị na anyị na -anwale ọtụtụ ugboro. Ihe kpatara na ọ gaghị ekwe omume nwere ike ịdị iche iche, mana mkpa ijikọ doro anya. Ọ bụ ya mere anyị ga -eji mara ụzọ ọ ga -esi kwe omume ime ya.
Ọ bụrụ na ị na -enwe nsogbu na nke a, mgbe ahụ anyị ga -agwa gị otu esi eme ya nwee ike jikọọ na sava EA FIFA. N'ụzọ dị otu a, ọ bụrụ na ọ na -enye gị ozi mperi ma ọ bụ na ọ gaghị ekwe gị omume ịmepụta njikọ ahụ, anyị nwere ike ịgbaso usoro ndị a ka anyị nwee ike mezuo ya, ka anyị nwee ike igwu egwu n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Nsogbu njikọ njikọ ihe nkesa a bụ ihe na -eme na nyiwe niile. M pụtara, ọ dịghị mkpa ọ bụrụ na ị na -achọ ijikọ na PC, PlayStation ma ọ bụ site na Xbox, n'ihi na n'ọnọdụ niile nsogbu a nwere ike ibilite. Ozi ọma ahụ bụ na n'ọnọdụ niile enwere ike itinye ihe ngwọta, nke mere na n'ikpeazụ ọ ga -ekwe omume ijikọ na sava EA FIFA ndị a. Agbanyeghị na ọ ga -ekwe omume na usoro ị ga -eso dịtụ iche na nyiwe ọ bụla.
Ọzọ anyị ga -ahapụrụ gị usoro nke ekwesịrị ịgbaso n'okwu a. N'ụzọ dị otu a, ọ ga -ekwe gị omume iguzobe a njikọ na sava ndị ahụ na Xbox, PlayStation ma ọ bụ PC. Ọ bụrụ na ị na -enwe nsogbu ịtọlite ​​njikọ ahụ, usoro ndị a kwesịrị inyere gị aka ịkwụsị ha yana ị ga -enwe ike ịnụ ụtọ egwuregwu ahụ n'enweghị ụdị nsogbu ma ọ bụ nkwụsị ọ bụla.
1 Ihe ị ga -ebu ụzọ mee
2 Lelee ọnọdụ sava ahụ
3 Akaụntụ akpọchiri?
4 Ndenye aha
Ihe ị ga -ebu ụzọ mee
Nsogbu a nwere ike dị na sava EA FIFA. Agbanyeghị na ọ dị mma na anyị na -eme ọtụtụ usoro nke mbụ, ka ịlele dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ njikọ ịntanetị anyị na -akpata nsogbu a, nke na -egbochi anyị ijikọ na sava ndị a ma ọ bụ na ọ bụ ọdịda na njikwa, ihe nwa oge. Ya mere, anyị nwere ike buru ụzọ rụọ ọrụ ndị a, iji hụ ma nke a enyela anyị ohere ijikọ na sava ndị ahụ ma ọ bụ:
Gbanyụọ igwe njikwa gị: Enwere oge mgbe ihe dị mfe dịka ịgbanyụ PlayStation gị ma ọ bụ Xbox gị nwere ike inyere gị aka idozi ọdịda a. Gbanyụọ njikwa wee gbanye ọzọ wee nwaa ijikọ mgbe ahụ.
Malite oyi: Ngwọta ọzọ ha na -akwadokarị site na EA na nke ahụ na -arụ ọrụ nke ọma bụ mmalite oyi nke njikwa gị (Xbox, PlayStation ma ọ bụ Nintendo). Site n'ime nke a, ọ bụ ihe nkịtị na ọ ga -ekwe omume ịtọlite ​​njikọ a na sava ahụ.
Malitegharịa ekwentị gị: Ọ nwere ike bụrụ njikọ Ịntanetị nke na -eme ka ọ ghara ikwe omume ijikọ na sava EA FIFA. Gbalịa ịmalitegharịa router ka njikọ Ịntanetị ga -amalitegharịa. N'ọtụtụ ọnọdụ njikọ ahụ na -arụkwa ọrụ ọzọ ọ ga -ekwe omume ijikọ mgbe ahụ.
Gbanwee njikọ: Ọ bụrụ na ị na -eji njikọ ikuku, nwaa iji wired, nke nwere ike kwụsie ike. Ọzọkwa na nke ọzọ, ị nwere ike ịnwa ịgbanwe njikọ ahụ, ka ị hụ ma ọ bụrụ na njikọ kwụsiri ike nke ga -enye gị ohere ijikọ na -enweghị nsogbu na sava EA FIFA kwuru.
Mmeghe ọdụ ụgbọ mmiri: Akụkụ ọzọ nwere ike inyere anyị aka bụ imepe ọdụ ụgbọ mmiri. Enwere ọnọdụ ebe imepe ụfọdụ ọdụ ụgbọ mmiri nke njikọ netwọkụ bụ ezigbo azịza maka nsogbu a. Ị nwekwara ike ịnwa iji aka gị dozie DNS na PC / njikwa gị.
O yikarịrị, ọ bụrụ na ịmeela mgbanwe ndị a, ị ga -eme ya enwere ike ime njikọ na sava ndị ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ nsogbu a na -adị n'ezie na njikọ Ịntanetị ma ọ bụ na ọ bụ ọdịda dara nke gbochiri njikọ ahụ. Yabụ na azịza ndị a na -emekarị ka o kwe omume ijikọ na sava EA FIFA wee si otú a gwuo egwu n'enweghị nsogbu.
Lelee ọnọdụ sava ahụ
O yikarịrị ka nsogbu njikọ a sitere kpọmkwem na sava ma ọ bụ sava ndị a na -ajụ ajụjụ. Enwere oge mgbe sava na -agbada, ọ bụrụ na dịka ọmụmaatụ enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ ejikọtara n'otu oge. Nke a ga - egbochi gị ịbanye. N'egwuregwu dị ka FIFA, enwere oge mgbe ị na -achọ ijikọ, ị ga -enweta ịdọ aka na ntị na ihuenyo nke kwuru na a na -eme njikọ, mana ozi ahụ ga -adị na enyo ahụ ogologo oge, na -emeghị njikọ ahụ n'ezie na egwuregwu ahụ.
Ihe anyị kwesịrị ime n'ụdị ikpe a bụ ịlele ọnọdụ ihe nkesa. Ọ bụrụ na anyị mara tupu oge eruo na sava a agbadala, anyị agaghị enye nsogbu ịgbalị njikọ, n'ihi na anyị ma na ọ gaghị ekwe omume n'oge ahụ. Na mgbakwunye, ọ na -enye anyị echiche gbasara ihe kpatara ma ọ bụ mmalite nke nsogbu a, nke bụ akụkụ ọzọ dị mkpa mgbe anyị na -achọ itinye azịza ya. Enwere ụzọ dị mfe iji lelee ọnọdụ sava ahụ.
Ọ bụrụ na ị na -enwe nsogbu ijikọ na egwuregwu dịka FIFA 22, ị nwere ike ịga na ibe nkwado ha. N'ebe a ị ga -enwe ike ịhụ ọkwa nke sava egwuregwu n'ozuzu ya, yana otu sava. N'ụzọ dị otu a, ị ga -enwe ike ịlele ma nsogbu njikọ gị ọ bụ n'ihi na sava adịghị na oge ahụ. Nke a dị mkpa maka mbipụta FIFA ndị ọzọ, ebe egwuregwu niile nwere ibe nkwado nke ha, ebe enwere ike ịhụ ọkwa ndị sava ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọta na sava adaala n'oge ahụ, ọ nwere ike bụrụ na enwere ọtụtụ ndị ọrụ, kamakwa a na -arụ ọrụ ndozi na ya. Nke a ga -akọwa ihe nsogbu na -ejikọ na sava na EA FIFA. N'akụkụ aka nke ọzọ, EA nwere ibe enyemaka na Twitter, ebe a na -akọ ya ozugbo gbasara nsogbu njikọ nwere ike, nke mere na ọ bụrụ na sava adaala, ị ga -ahụ ya na ibe ahụ ozugbo.
Akụkụ ọzọ iburu n'uche bụ na Akpọchiela ma ọ bụ kwụsịtụrụ akaụntụ gị. Ndị ọrụ ahụ nwere akaụntụ EA nke egbochiri ma ọ bụ kwụsịtụrụ enweghị ohere ịnweta egwuregwu ịntanetị. Nke a bụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na -amaghị na ha na -ezute ọnọdụ a mgbe ha na -agbalị igwu egwu n'ịntanetị. Nke a bụ mmachi dị mkpa, nke nwere ike bụrụ kpọmkwem ihe kpatara nsogbu ahụ n'okwu gị.
Yabụ, lelee ma ọ bụrụ na egbochila ma ọ bụ kwụsịtụrụ akaụntụ gị. Nke a bụ ihe a na -agwakarị gị site na email, yabụ ị kwesịrị ịma ya tupu oge eruo, tupu ịnwa ijikọ na sava ahụ. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, egbochila akaụntụ gị, ị ga -akpọtụrụ EA ka igbochi ma ọ bụ nkwụsị kwụsị. Dabere n'ihe i mere (ma ọ bụ bo gị ebubo ime), usoro a nwere ike were ogologo oge dozie. Ị nwekwara ike ịlele akụkọ okuku, ịhụ ma ọ bụrụ na nke a bụ nsogbu.
Ọ bụrụ na a kwụsịtụrụ ma ọ bụ gbochie akaụntụ ahụ ma ị kpọtụrụ EA, nke kpebiri ịkwalite nkwusioru ahụ, ị ​​ga -enwe ike igwu egwu n'ịntanetị ọzọ. N'ọnọdụ ahụ, sava kwesịrị ịdị na -arụ ọrụ nke ọma, yabụ enwere ike ijikọ na sava EA FIFA wee gwuo egwu mgbe ahụ. Nke abuo, ma eleghị anya, ehichapụla akaụntụ gị, na dịka ọmụmaatụ ị kpochapụrụ ya ma ọ bụ mmadụ emela ya, si otu a na -egbochi gị ịbanye. Yabụ na ọ dị mma ịlele ma nke a bụ ikpe, n'ihi na mgbe ahụ ị ga -emepụta akaụntụ ọhụrụ iji nwee ike igwu egwu n'ịntanetị.
Dị ka ị maraworị, iji nwee ike igwu egwu n'ịntanetị ị chọrọ akaụntụ sitere na Xbox Live Gold, PlayStation Plus ma ọ bụ Nintendo Switch. Ọ bụrụ na ịnweghị otu n'ime ndenye aha ma ọ bụ akaụntụ ndị a, ị gaghị enwe ike ịnweta atụmatụ egwuregwu ịntanetị. Nke ahụ bụ, ọ gaghị ekwe omume ijikọ na sava EA FIFA n'ihi na ịnweghị akaụntụ na -enye gị ohere ịnweta ha. Ihe ị ga -eme n'okwu a bụ imepụta otu n'ime akaụntụ ma ọ bụ ndenye aha a, ka e nye gị ohere ịnweta egwuregwu ịntanetị a.
Otu a ka ọ dịkwa maka ndị otu EA Play. Ọ bụrụ na ị bụ onye otu ị nwere ike ịnweta egwuregwu ịntanetị a, mana ọ bụrụ na ndị otu gị emebiela, mgbe ahụ ị ga -ahapụ n'enweghị ohere a. Ọ bụghị na ọ gaghị ekwe omume ijikọ na sava EA FIFA n'ihi na sava ahụ adaala, mana na ndị otu gị agwụla ma ị nweghịzi ohere a. N'ọnọdụ a, ọ dị mkpa ịlele ọkwa ndenye aha gị, ịhụ ma ọ ka na -arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ, ebe ọ nwere ike bụrụ njehie sava, ma ọ bụrụ na ndenye aha gị ka na -arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Egwuregwu » Otu esi ejikọ na sava EA FIFA
Ga-esi mara ma ọ bụrụ na ehichapu kọntaktị na WhatsApp